ဘယ်အချက်တွေက distribution channel (marketing channel) ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ လွှမ်းမိိုးမှုတွေရှိသလဲ။??????? | mLearn Myanmar
ဘယ်အချက်တွေက distribution channel (marketing channel) ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ လွှမ်းမိိုးမှုတွေရှိသလဲ။???????
Marketing channel (Distribution channel) ကိုရွေးချယ်ပြီဆိုရင် ကိုယ်က နည်းစနစ်ကျကျ ဂရုတစိုက်နဲ့ လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးမှ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒီ channel ရွေးချယ်မှုကသင့် marketing strategy နဲ့ middle man တွေရဲ့ strategy တွေကိုပါ ထိခိုက်ရုံသာမကဘဲ သင့်လုပ်ငန်းအဖွဲအစည်းရဲ့ မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုတောင် ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်က မှားပြီးရွေးချယ်လိုက်ပါပြီတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာအဆင်မပြေလို့ ပြောင်းလဲရမှာတွေက သင့်ကို အချိန်ကောလူကောငွေကောကုန်စေပါတယ်။ ဒီတော့ marketing channel ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကိုထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။
ဒါကတော့ ပထမဦးဆုံး အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါ။ ရောင်းမယ့် ကုန်ပစ္စည်းက FMCG ဆိုရင် သင်က automobile ထက် တခြားနည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်လို အလှကုန်ပစ္စည်းမျိုးနဲ့ ကိတ်မုန့် စားစရာလိုမျိုးပုပ်သိုးလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဖြန့်ချီတဲ့ ပုံစံကတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီးကွဲလွယ် ကြေလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင်တော့ သေချာကိုင်တွယ် လုပ်ကိုင်မှုအပြင် ကြားက middle man တွေကိုလည်း တက်နိုင်သလောက် လျှော့ချပြီးတော့ channel ကိုတတ်နိုင်သမျှ တိုအောင် လုပ်ရပါမယ်။
ဝယ်ယူသူ အမျိုးအစားကလည်း channel ပုံစံကိုပြောင်းသွားစေပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းတယ်ဆိုရင် ဝယ်သူတွေအနေနဲ့က ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကိုင်တွယ် စစ်ဆေးပြီးမှ ဝယ်မယ့်သူများပါတယ်။ ဒါက တစ်ဦးချင်းဝယ်သူတွေ အတွက်ပါ။ အကယ်၍ သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူသူက လုပ်ငန်းသုံးအတွက် ဆိုရင်တော့ ဥပမာ hotel ပိုင်ရှင်မျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်မကြည့်တော့ပါဘူး။ agent ကနေတစ်ဆင့် ဒါမှမဟုတ် supplier ဆီကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ် သွားပါလိမ့်မယ်။
၃။ စျေးကွက် အရွယ်အစား
ဒါကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်စျေးကွက်က ကြီးမားတဲ့ စျေးကွက်ဆိုရင် သင့်ဆီမှာ channel member များများရှိမှ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲသင့်စျေးကွက်ကသေးတယ်ဆိုရင်တော့ direct selling လုပ်သင့်ပါတယ်။
၄။ သင့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ resources တွေ
သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ထုတ်ကုန် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ သင်က ဝယ်ယူစားသုံးသူတွေထံကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချသင့်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကလည်း ကြီးမယ် လူအင်အားလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ကြားခံနယ်လူတွေကိုဖယ်ပြီး သင့် customer တွေကိုတိုက်ရိုက် ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းကသေးပြီး ငွေကြေးအင်အား လူအင်အား မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ experience က channel member တွေ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။
၅။ Marketing environment
Marketing environment ကလည်း channel တွေအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဥပမာဒေါ်လာစျေးကျတယ် တက်တယ် ဒီလိုအခြေအနေတွေဆိုရင် စျေးကွက် မတည်ငြိမ်သလို ဖြန့်ချီမှုအပေါ်လည်း သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာပါတယ်။
၆။ ကြားခံနယ် Middleman တွေရှိခြင်းမရှိခြင်း
Intermediary ရှိခြင်းမရှိခြင်းကလည်း channel ရွေးတဲ့အခါ ထည့်စဉ်းစားရပါတယ်။ ကိုယ်က middleman တွေလိုတယ်။ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ channel ဖြန့်ချီတဲ့ ပုံစံမှာက middleman လုံလုံလောက်လောက် မရှိဘူးဆိုရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၇။ သင်လက်တွဲတဲ့ retailer၊ partnerတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်
ဒီအချက်ကတော့ သင်ကသင့်ပစ္စည်းတွေကို retail shopတွေမှာတင်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကသင့် ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝယ်ယူသူတွေကို ရှင်းပြတတ်ရမယ်။ ဆွဲဆောင်တတ်ရပါမယ်။ ဒီလိုအချက်တွေအပြင် သင်အသုံးပြုတဲ့ channel က တစ်ခြား service တွေပါပေးတဲ့အခါ သင့်ပစ္စည်း ရောင်းထွက်လိုအားကို ပိုမြင့်စေပါတယ်။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးတဲ့channelကအကုန်အကျ သက်သာမယ်။ ရောင်းအားကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက် အလွန်ပါဘဲ။
၉။ ပြိုင်ဘက်တွေ နဲ့ middleman ရွေးချယ်မှု
ဒီအချက်ကတော့ နည်းဗျူဟာအရဖြစ်သွားပါပြီ။ သင့်ရဲ့ middleman တွေကသင့်ပစ္စည်းတစ်ခုထဲကိုကိုင်တွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ပစ္စည်းကိုပါ ရောင်းချပေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ချို့တွေကသူတို့ အမြတ်များများကျန်တဲ့ ပစ္စည်းကိုပိုပြီးရောင်းချ ပေးတတ်ကြပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ဖြန့်ချီရေး channel ရွေးချယ်တာကလုပ်ငန်းတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုကရည်ရွယ်ထားတဲ့ စျေးကွက်မှာအောင်မြင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပါ။ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက channel တူကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေက channel တစ်ခုရွေးတော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တွေပါ။
ဒီအချက်တွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းညှိနိုင်ပြီးအကောင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး channel တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကတော့ လုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အတွက် ဆက်စပ် ဖတ်စရာများ
ထိရောက်မှုရှိရှိ Sales Language တစ်ခုကိုဘယ်လိုရေးမလဲ
Customer အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်မယ့် Content တွေ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ